Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ mgbasa ozi Laos » Laos gbatịrị mkpọchi mba niile ruo Ọgọst 18
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ mgbasa ozi Laos • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
A ga-agbatị mkpọchi ka ọnọdụ COVID-19 dị na Laos akabeghị nke ọma na ọnọdụ mba ndị agbata obi ka nọ n'ihe egwu.
Mkpọchi mba dị ugbu a, nke etinyere na July 19, atọrọ ka ọ ga -agwụ na Tuesday.
Ruo ụbọchị Tuzdee, ọnụọgụ COVID-19 enwetara enyocha na Laos ruru 7,015 na mmadụ asaa nwụrụ.
Ngụkọta nke ndị ọrịa COVID-3,616 19 agbakeela ma hapụ ha n'ụlọ ọgwụ.
Gọọmentị Laos kwupụtara na ekpebiela ịgbatị mkpọchi COVID-19 dị ugbu a na mba niile ruo Ọgọst 18 ka ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa coronavirus ọhụrụ na-arị elu.
Onye osote onye isi ụlọ ọrụ Prime Minister, Thipphakone Chanthavongsa, gwara ndị nta akụkọ na isi obodo Lao Vientiane na Tuesday na a ga-agbatị mkpọchi ahụ ka ọnọdụ COVID-19 dị na Laos akabeghị nke ọma na ọnọdụ na mba ndị agbata obi ka nwere ihe egwu.
Nke ugbu a Laos Mkpọchi mba, nke etinyere na July 19, atọrọ ka ọ ga -agwụ na Tuesday.
Kọmitii Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Mgbochi na Njikwa COVID-19 na Tuesday kọrọ akụkọ ọhụrụ 237 ebubata na ikpe 13 na-ebute site na mpaghara.
N'ime ikpe mbubata, a kọrọ akụkọ 78 n'isi obodo Lao Vientiane, 63 na Savannakhet, 48 na Champasak, 30 na Khammuan, 16 na Saravan, na abụọ na mpaghara Vientiane.